I-Apple ineengxaki kwakhona kwimizi-mveliso yayo e China | IPhone iindaba
I-Apple yenza uninzi lweemveliso zayo e-China, okwangoku kule bhanyabhanya ndiyathandabuza ukuba ukhona umntu ongaziyo, enyanisweni uyibeka ngasemva kwimveliso nganye yazo: Bahlanganisana e China. Obu budlelwane noFoxconn, enye yezona nkampani zibaluleke kakhulu kweli lizwe, bumlethele iintloko ezithile malunga nokukhuselwa kwamalungelo abasebenzi, ngenxa yezitenxo ezihlala zibonakala zenzeka kwizityalo zakhe. U-Apple uphinde waba neengxaki e-China ngaphezulu kwendibano yeFoxconn kunye nendlela ababaphatha ngayo abasebenzi babo, ngaba inkampani yaseCupertino isola?
Yonke into i-Apple izakuzisa kwi-Keynote ngomhla we-10
Inyani yile yokuba i-China Labour Watch (CLW), ikufumene oko UApple noFoxconn baqesha inani labasebenzi bethutyana kwiifektri zabo. Umthetho e-China kwithiyori akavumeli ngaphezulu kwe-10% yabasebenzi ukuba baqeshwe okwethutyana, nangona kunjalo, kwisityalo esikhulu somhlangano esinikezelwe yiFoxconn kwinkampani yeCupertino, kufunyenwe i-50%. , inani eliphakame kakhulu kunelona liphezulu livunyelweyo ngumthetho wesigebenga saseAsia.
Sifumanisa ukuba ipesenteji yabasebenzi bethutyana ingaphezulu kwemigangatho yethu. Sisebenzisana neFoxconn ukusombulula le ngxaki, amanyathelo okulungisa aya kuthathwa kwangoko.
Ngokuhambelana nale migca, iApple ikhuphe ingxelo engxamisekileyo, ngelixa iFoxconn ikhuphe enye eyayithetha into enye. Suku Kuphela kwesimangalo esenziwe yi-China Labour Watch ngokuchasene neApple kunye neFoxconn, ngakumbi malunga nexesha elongezelelekileyo elenziwa ngabasebenzi, Ukutyhola iinkampani zombini "ngokuxhaphaza", into eyathi yakuphikwa yinkampani yaseCupertino.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Izaziso » I-Apple ineengxaki kwakhona kwimizi-mveliso yase China
UPhilips uvuselela uluhlu lweHue ngexesha le-IFA 2019